» नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा पहिलो पटक महिला सिफारिस
नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा पहिलो पटक महिला सिफारिस
शुक्रबार नै राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्ती गर्ने तयारी
२० फाल्गुन २०७७, बिहीबार २२:०२
काठमाडौं । सरकारले सम्भवतः भोलि शुक्रबार नै नेपाल राष्ट्र बैंकमा रिक्त दुई गर्भनर पदमा पदपूर्ति गर्नेछ । त्यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चार जनालाई डेपुटी गभर्नरमा सिफारिस गरेकोेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो पटक महिलालाई पनि डेपुटी गभर्नरमा नियुक्तीको लागि सिफारिस गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी महाप्रसाद अधिकारीले रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्तीका लागि कार्यकारी निर्देशकहरु डा. निलम ढुङ्गाना तिम्सिना, देव कुमार ढकाल, डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको छन् । अब सरकारले उल्लेखित मध्येबाट दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त गर्नेछ । सो मध्ये डा. ढुंगाना सिनियर कार्यकारी निर्देशक हुन् । उनी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख रहेकी छिन् ।
सरकारले पहिलो पटक महिलाको नाम सिफारिस भई आएकोले उनलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने सम्भावना बलियो रहेको छ । त्यस्तै, अर्का देवकुमार ढकाल, र प्रकाश श्रेष्ठ मध्येबाट एक जनालाई डेपुटी गर्भनर बनाउने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । यद्यपि उल्लेखित चार जना मध्ये जो सुकैलाई सो पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।